Apple Watch Series 2: Vanotsoropodza chizvarwa chino vanofungei? | Ndinobva mac
NeChitatu, Gunyana 7, zvizvarwa zvitsva uye zvinokunda zvezvigadzirwa zveApple zvakanyanya uye nhare zvakasvika. Isu hatina kuona chero chinhu chakanangana nePads, kunze kwekumwe shanduko mune yekuchengetera masimba, ayo yakawedzerwa kuti ipe 32 kana 128Gb sarudzo. Iyo iPhone 7 uye 7 plus iri kupa zvakawanda zvekutaura nezvazvo, pamwe neAirPods, asi Imwe yeakakurumbira emagetsi zvigadzirwa yaive Apple Watch Series 2. Ndo izvo zvatichataura nezvazvo nhasi, iyo Apple Watch, iyo yatotanga kusvika maoko, kana kuti zvirinani, mawoko evatsoropodzi uye vezvenhau.
Chii chinoita maonero uye wongororo dzeakanyanya kuona eangu akarumwa nekambani yeapuro? Iyi dhata inokanganisa danho rekutenga revashandisi vazhinji, saka harifanirwe kutorwa sedambe. Ive nekuchenjerera neApple Watch Series 2.
1 Iyo Apple Watch 2 inoenderana nekuongororwa
2 Kuchinja kana kungochinja Apple Watch?
Iyo Apple Watch 2 inoenderana nekuongororwa
Izvo zvakanaka zvakakwana kuti zvakakosha kutenga? Chii zvachinja? Inopa iwo akafanana mushandisi ruzivo senge yapfuura modhi? Chizvarwa chinosvetuka chinokurudzirwa kana iwe uchitova neChitsauko 1? Zvichida ini ndaigona kupindura iyi mibvunzo yese nemhinduro imwe chete: Kwete, asi zvimwe zvinoda kuti utaure nezvehunhu, uye kwete kuti upindure mune monosyllables. Tisati tataura pamusoro peizvo vezvenhau vanofunga, ngatione kuti ndeipi nhau dzavakaunza neApple Watch Series 2
Kutanga, kuwedzera kwechidzitiro kupenya. Zvinopfuura kaviri. Sezvavanotaura muApple's 107-yechipiri kushambadzira, zvisati zvaita sekunge uine makenduru mazana mana akabatidzwa, izvozvi zvichaita sekunge uine chiuru, uye zvese izvi pa 450 kana 1000mm skrini. Kusvetuka kusinganzwisisike kunozofadza kuona nguva kana ziviso muzuva.
Ivo pakupedzisira vaisanganisira a nyowani mbiri-musimboti chip ine GPS. Iye zvino haingori chete ine simba rakawanda, asi inokuudza iwe uripi uye nyora nzvimbo yako. Yakanaka kune vatambi mune iyo pfungwa. Sezvo isingori isina mvura chete, asi isina mvura, unogona kuenda nayo kurwizi, dziva, kumahombekombe uye zvimwe. Ehezve, neyakaganhurirwa yekudonha kusvika makumi mashanu emamita. Inozoyera zvakaringana kurovedza muviri kwaunoita uchinge uchishambira uye kunatsiridza zvakanyanya.
Uye zvechokwadi, zvingave sei zvisina kudaro, kunyangwe isu tichifunga kudaro, zvinodhura. Isu tabva kubva kungangoita € 420 yemuenzaniso we42mm kuenda ku € 469. Handifunge kuti zvine chikonzero uye ndicho chimwe chezvikonzero nei ndisingafunge kuti chizvarwa chakanaka. Kuchinja kudiki kwekuwedzera kwemutengo saizvozvo.
Kuchinja kana kungochinja Apple Watch?
Ndiwo mubvunzo unobvunzwa nemunhu wese. Ndiyo data inoitika mumablog uye mawebhusaiti enhau eApple. Vashandisi uye vapepeti vanotaurawo nezvazvo. Isu hatisi kutarisana nechimbichimbi kana chakakosha shanduko yeApple Watch. Izvo hazvisi kuzochinja kana kugadzirisa hupenyu hwedu kuti huve nani. Kunze kwekunge isu tavatamba mitambo inogona kutora mukana wekugona kwemvura nyowani kana GPS, zvinogona kunge zvisiri nyore kwatiri kuti titenge akateedzana 2 pamusoro peakateerana 1. Uye ndezvekuti hongu, zvirinani kupfuura chizvarwa chekare, asi kwete zviri nani.
Kupenya kwakawedzera kunobata ziso rangu. GPS nesimba zvinokosheswa. Asi ichiri imwechete Apple Watch mune ngowani nyowani, sekutaura kwaLisa Simpson. Ehe, iyo ngowani yekufananidzira nyowani, asi iwe ungabhadhara ma50 euros kune izvo? Nekusahadzika mumhepo uye ndinotarisira kuti rimwe zuva Apple ichaburitsa chizvarwa chakakosha chaizvo, ini ndasarudza kumirira. Ini handina kugutsikana panguva yehurukuro uye ini ndinofarira kuchengetedza mari, iyo isingadonhe kubva kudenga. Ini ndinofunga zvinokurudzirwa kuishandisa paAirPods, pane ramangwana iPad Pro 2, kana pakurarama, zvinoita kunge zvisiri, asi zvakare zvinodikanwa.
Uye iwe, iwe unofungei nezveApple Watch Series 2? Haisi kuchinja kamwe kamwe, kungori kuvandudzwa. Ndiwo meseji inosara nevatsoropodzi, asi hazvireve kuti panogona kunge paine dzimwe pfungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Series 2: Vanotsoropodza chizvarwa chino vanofungei?
Tarisa 2 ndiyo yaifanira kunge iri 1. Ivo vakachinja zvakaringana kuitira kuti ruzivo rwevashandisi ruve rwakanaka, zvirinani zvirinani. Ndiwo musimboti wekushanduka.
Ehe, GPS uye kugona kudzika kunofanirwa kuve chaive chizvarwa chekutanga. Shanduko, asi kwete shanduko. Uye kuve kwekutanga uye kunodiwa kuvandudzwa kusiri kutora chishandiso padanho nyowani, ini handinzwisise kuti nei vachikwidza mutengo uye ndizvo zvakandinetsa zvakanyanya. XD
Ishe weRings: Hondo muNorth mutambo, uri kutengeswa kwenguva shoma